M/weyne Shariif iyo R/wasaare Meles oo kulan ku yeeshay Addis-ababa, kana wadahadlay arrimo khuseeya labada dal. – Radio Daljir
M/weyne Shariif iyo R/wasaare Meles oo kulan ku yeeshay Addis-ababa, kana wadahadlay arrimo khuseeya labada dal.
Agoosto 2, 2011 12:00 b 0
Addis-abab, Aug – M/wenaha dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya iyo R/wasaraha Ethiopia ayaa maanta ku ballaaran ku yeeshay magaalada Addis-ababa ee waddanka Ethiopia kaasooo labada mas’uul ay uga hadleen arrimo quseeya labada dalka.
M/weyne Shariif Sh . Axmed iyo R/wasaare Meles Zinawi ayaa kulankooda oo wakhti badan qaaday iskula soo qaaday arrimo ay ka mid yihiin xaaladaha abaareed ee ku habsaday Geeska Afrika, is-kaashiga dhinaca amniga iyo xiriirada guud ee u dhexeeya labada waddan ee Soomaaliya iyo Ethiopia.
Madaxdu waxay si weyn u falan-qeeyeen xaaladda ba’an ee abaarta ka jirta labadooda waddan iyagoo isla meel-dhigay habkii lagu caawin lahaa kumanaanka qoys ee Soomaalida ah ee ay barakicisay abaaraha ku dhufatay Soomaaliya kuwaasi oo tiro badan oo ka mid ahi ay maalin walba ku sii qul-qulayaan xerayaha qaxootiga ee dalalka dariska ah oo ay Ethiopia ka mid tahay.
Dhinaca kale M/weyne Shariif Sh . Axmed iyo R/wasaare Meles Zinawi, waxay isla soo qaadeen arrimo kale oo ay ka mid yihiin is-garabsiga dhinaca ammaanka iyagoo is hogo-tusaaleeyey hababka ugu habbooyin ee labada dhinac iskaga gacan-siin karaan arrimaha nabad-galyada.
Madaxdu markii ay ka hadlayeen arrimaha amniga waxaa ay carabbaabeen Al-shabaab Soomaaliya iyo Al-qaacidada bariga Afrika, waxaana ay garawsadeen is-kaashi buuxa oo laga yeesho arrintaasi iyadoo ku cel-celiyey baahida loo qabo is-gaashaan-buursi laga yeeshay ururradaasi.
Kulanka m/weyne Shariif uu la yeeshay R/wasaare Meles Zinawi ayaa qayb ka ah socdaallo m/weynuhu uu ku kala bixinayey waddamo ku yaalla bariga isagoo horay u tagay dalalka Suudaan iyo Jabbuuti, inkastoo bilawgii safarkiisana uu maray Ethiopia oo uu hadda ku sugan yahay.
Puntland oo badbaadisay 14 bad-maax oo ay afduub u haysteen burcad badeed Somali ah.
1-da Ogoosto oo maanta maamuus weyn loogu sameeyey Garowe (Taswiir).